‘एकीकरण सार्थक बनाउन मेरो जित जरुरी’ « मेचीखबर
‘एकीकरण सार्थक बनाउन मेरो जित जरुरी’
१८ मंसिर २०७४, सोमबार १२:३७
अन्तरवार्ता, विशेष समाचार
राम कार्की : प्रतिनिधिसभा उम्मेद्वार
झापा क्षेत्र नं. १
(पोलिट्व्यूरो सदस्य : नेकपा माओबादी केन्द्र एवम्
पूर्व सञ्चारमन्त्री )
बामपन्थी प्रगतिशील राष्ट्रबादी गठबन्धनको तर्फबाट झापा क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बन्नु भएका राम कार्की पार्थ’ बौद्धिक नेता एवम् बाम गठबन्धनको सूत्राधारको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । चुनावी सन्दर्भमा पत्रकार झुलन रेग्मीले लिएको अन्तरवार्ता प्रस्तुत छ–
मेडिकल कलेज र इन्जनियरिङ कलेज खोल्छौँ ।
बन्द भएका उद्योगहरुलाई खोल्छौँ ।
जित्ने आधार वामपन्थी मत नै हो ।
नयाँ समाजवादको रणनीति बनाउन चाहन्छु ।
प्रतियोगितामा सँधै म प्रथम भएको छु ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एजेन्डाहरु स्थापित गर्न मैले योगदान दिएको छु । अहिले संविधानमा जुन समाजवाद उल्लेख गरिएको छ । त्यो समाजवाद परिभाषित भएको छैन । कस्तो समाजवाद भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । संसारमा विभिन्न ढाँचाका समाजवादहरु छन् । त्यसमा वीपी कोइरालाहरुले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद । अर्काेतर्फ लेनिन र माओहरुले विकसित गरेको समाजवाद । मेरो रायमा नेपालका निम्ति विश्वमा भएका समाजवादहरुको प्रयोग गरी त्यसलाई नयाँ रुपमा हामीले नेपालमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ । बेलायतको आन्दोलन के भयो ?अमेरिकामा समाजवादी आन्दोलन के भो ? युरोप वा अरु देशहरुमा समाजवादी आन्दोलन के भो ? त्यो हेरिँदैन । जसरी सोभियत संघ ढल्यो । त्यसरी नै वेलायतका लेबर पार्टीका नेताहरुले पनि जीवनको अन्तिममा लेखेका छन् कि श्रमिकहरुका लागि गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यो हुन सकेन । चुनावबाट नयाँ प्रयोग गर्छाै कामदारका लागि पनि सजिलो व्यवस्था ल्याउँछौ भन्ने सोचका साथ त्यसमा हामी असफल भयौँ भन्ने कुरा उनीहरुको जीवनी पढेर सुनेको छु । त्यसो हुनाले नेपालका निम्ति समाजवाद नै मौलिक चरित्र बोकेको नेपालको विशेषता सुहाउँदो र इतिहासमा समाजवादका प्रयोगहरु भए त्यसका सफलता र असफलताको शिक्षाबाट नेपालमा समाजवाद लागु गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ । समाजवाद कस्तो हुन्छ, के हुन्छ ? भन्ने रणनीति बनाउनका निम्ति स्वाभाविक रुपमा म योगदान दिन चाहन्छु ।
२०÷३० वर्ष नेपाललाई राजनीतिक एजेन्डाबाट अगाडि बढाउने र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वतन्त्र स्वभिमानी, आत्मनिर्भर, सम्पन्न र समृद्ध तथा विविधतायुक्त भएको नेपाल बनाउनु पर्नेछ । यी एजेन्डा हामीसँग भएकाले र यी एजेन्डाका आधार र म आफू पनि समाजवादका निम्ति लडिरहेको व्यक्ति भएको हुनाले त्यसले पनि मलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने नै हो ।